America Yotemera Zvirango Vakuru veZvikwata Zvinopfurikidza Mwero muAfrica
Chikwata cheAl-Shabab chichiita zvidzidzo zvehondo muMogadishu.
Lieutenant General Scott Berrier vanotungamira bazi rezvekusora mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica kana kuti U.S. Army Director of the Defense Intelligence Agency vanoti dambudziko revanopfurikidza mwero riri kuramba richinetsa muAfrica sezvo paine zvikwata zvinodyidzana vezvikwata zvakaita Al Qaida neIslamic State zvakawanda.
Zvikwata zvakaita secheAl Shabaab zvinodyidzana neAl Qa’ida zviri kukonzera kusagadzikana kumabudazuva kweAfrica. Lieutenant General Scott Berrier vakayambira kuti zvikwata zvakaita seJama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin kana kuti JNIM, zviri kukanganisa zvakanyanya kumawirira kweAfrica uye chikwata cheISIS kuMozambique chapawo kuti vakawanda vaende muhupoteri.
Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti pane vanhu vashanu vave kuzivikanwa kuti vanotungamira zvikwata zvinopfurikidzwa mwero izvi vaiswa pazvirango kana kuti Specially Designated Global Terrorist pasi pechikamu cheExecutive Order 13224, chakavandudzwa.
Vanhu ava vanoti Bonomade Machude Omar anozivikanwa nekuti, Abu Sulayfa Muhammad na Ibn Omar vanotungamira chikwata cheISIS kuMozambique.
Vamwe vakatemerwa zvirango ndi Sidanag Hitta, anozivikanwa nekuti Abu Qarwani na Abu Abdelhakim al-Kidali vari kutungamira chikwata cheJama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin kudunhu reKidal kuMali.
Salem Ould Breihmatt anozivikanwa nekuti Abu Hamza al-Shanqiti na Hamza al-Mauritani vanotungamira vanopfurikidza mwero mudunhu reMopti kuMali.
Ali Mohamed Rage anozivikanwa nekuti Ali Dheere anova mutauriri weal-Shabaab anombotungamira nyaya dzehutororo mu Kenya ne Somalia atemrwawo zvirango.
Midziyo yose yevanhu ava munyika dzinodyidzana neAmerica ichatorwa uye zvizvarwa zveAmerica hazvibvumidzwe kudyidzana navo.
Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika VaAnthony Blinken vanoti America yakazvipira kuvhara nzira dzose dzinoshandiswa neISIS-Mozambique, JNIM, neAl-Shabaab sezvo zvose zviri zvikwata zvakaiswa pazvirango kana kuti Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists nechinangwa chekuona kuti hazvirambe zvichikonzera rufu rwevanhu.
Asi VaBlinken vanoti kuti zvikwata izvi zvisarambe zvichidzika midzi kumawirira, mabudazuva kana kuchamhembe kweAfrica zvinoda mushandirapamwe pakati penyika dzose.
America Yozvipira Kushanda neAfrica Kupedza Kupararira kweChirwere cheMalaria
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakupedza chirwere chemalaria chinokonzerwa nehumhutu muAfrica.
Chirwere chemalaria chave nemakore akawanda uye chiri chekutanga pazvirwere zvinouraya vanhu vakawanda pasi rose.
Chirwere ichi chakawanikwa muhumhutu kana kuti mosquito yakafa makore mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Asi chirwere ichi chinonzi chakazotanga kupararira zvakanyanya makore zviuru gumi kana kuti 10, 000 apera apo vanhu vakatanga kugara mumaguta, kuchengeta zvipfuyo uye kurima.
Mumakore ano, chirwere ichi chinobata vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri gore rega rega uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vanofa nechirwere ichi gore roga roga zvikuru muAfrica.
Kubva muna 2005 pakaparurwa hurongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti US President’s Malaria Initiative hwekurwisa chirwere ichi, America yatungamira muhurongwa uhu kuburikidza nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika re U.S. Agency for International Development kana kuti USAID.
Chirongwa chemutunbamiri wenyika yeAmerica ichi chabatsira kuti chirwere ichi chisatapurirwe kuvanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 billion uye kudzivisa kufa kwevanhu nemalaria vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu kana 7.6 million.
Musi wa 6 Gumiguru, America yakaparura hurongwa hwemakore mashanu hwakanangana nekupedza chirwere chemalaria.
Izvi zvinobatsirawo hurongwa hwekuti vanhu mamiriyoni mana vasafe nechirwere ichi uye kuti vanhu bhiriyoni imwe chete vasabatwa nacho panosvika gore ra2025.
Chirongwa chekupedza malaria nechimbi chimbi chine zvinangwa zvitatu, Chekutanga kwaive kudzikisa huwandu hwevanofa nechirwere ichi nezvikamu makumi matatu nematau kubva muzana muna 2025 munyika dzine dambudziko rechirwere ichi rakakurisa.
Chikamu chechipiri kudzikisa chirwere ichi nezvikamu makumi mana kubva muzana munyika dzakatarisana nechirwere ichi zvakanyanya. Chikamu chekupedzisira America inoda kupedza dambudziko rechirwere ichi zvachose munyika gumi dzairi kubatsira. America inoti zvinokwanisika kuzadzikisa zviga zvose izvo sezvo ikozvino kwave nenhomba yekurapa malaria.
Musi wa 6 Gumiguru World Health Organization yakaparura nhomba yekutanga yekudzivirira malaria. Vanokokera mabasa muchirongwa chemutungamiri weAmerica chekurwisa malaria, Dr Raj Panjabi vanoti iyi ndiyo nhomba yekutanga ichabatsirawo vana kuti vasafe nemalaria muAfrica. Vanoti nyika makumi mana dzabudirira kupedza zvachose chirwere chemalaria ichi.
Dr Panjabi vanoti kunyangwe pachiine mutoro wekupedza chirwere ichi zvachose pasi rose, kurwisa chirwere ichi kuchabatsirawo kurwisa zvimwe zvirwere zvinopararira pasi rose zvichauya.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chirwere cheCovid-19 muAfrica. Maaverengerwa neni Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
America Inotemera Zvirango Vasori Vana vekuIran
America yatemera zvirango panhengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomerwa mhosva kwadzakaitwa negweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York, iro rakati vasori vana ava vakaedza kubvuta mugari weAmerica kuti vamuendese zvechisima kuIran.
Munhu wavakaedza kubvuta ndiMasih Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari wemuAmerica.Alinejad murwiri wekodzero dzavanhu, anoshora zvikuru hurumende yeIran uye anechirongwa chaanokokera panhepfenyuro yeVoice of America.
Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaAntony Blinken, vanoti zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yepasi pose yekudyidzana kwenyika, vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica, kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende yeAmerica.
Vasori vana vakatemerwa zvirango ava vakuruvakuru mubazi revasori muIran, vanosanganisa Alireza Shahvaroghi Farahani, uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemerwavo zvirango neAmerica, vanoti Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi, naOmid Noor.
VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete, asi zvizvarwa zveIran zvisingawirirani neIran zvinogara muUnited Kingdom, Canada, nekuUnited Arab Emirates.
Vasori vana ava vanonzi vanoita basa sekutumwa kwavanenge vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezveruzivo nekuchengetedzwa kweIran, kana kuti Ministry of Intelligence and Security (MOIS), iro rinonyanya kutyiwa nevanhu muIran. Bazi reMOIS rakatemerwavo zvirango neAmerica.
Bazi reAmerica rinoona nezvemari, reUnited States Treasury Department, rinoti MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran, richitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwenyika, kwakaita sekuEurope nekune dzimwe nyika, kuri kuitwa neMOIS.
Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisisiri mumaoko mavo uye hapana munhu ari muAmerica anobvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo uye mabhanga nemamwe makambani anoitabasa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yevasori vana ava.
VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachityisidzirwa kana kunyaradzwa, vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungiswa.
VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kweAmerica.
Editorial: US imposes Sanctions on Four Iranian Spies